06/11/2015 – Gentleman Magazine
ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ခု
ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ခု ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားတွေက လိင်ဆက်ဆံဖို့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီး တိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသိပညာဗဟုသုတဆိုတာ စွမ်းအားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် လိင် ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို သိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပြီး၊ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်
တိုင်းပြည်က သင့်ကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့ မေးမယ့်အစား.. တိုင်းပြည်အတွက် သင်ဘာပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာပဲ မေးပါ
အိန္ဒိယ သမ္မတပြောသွားတဲ့ ဆုံးမစကား မြန်မာနိုင်ငံ က လူတွေ အတွက် လည်း တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ ခင်ဗျားတို့ အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်တယ်။ ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ တာဝန် သိစိတ်တွေ
Steve Jobs ဆီက ဘာတွေအတုယူမလဲ ?
Steve Jobs ဆီက ဘာတွေအတုယူမလဲ ? ‪ ——————————————- Steve Jobs ကို Apple ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်သူ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေနဲ့ အများစုက သိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Steve Job အကြောင်းကို ကြားလိုက်ရတာနဲ့ ဘာတွေက သင့်ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သွားစေနိုင်သလဲ
ဖွင့်ဟမတောင်းဆိုဝံ့သည့် ကိစ္စများ ချစ်တင်းနှောတဲ့ကိစ္စမှာ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအတွက် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ အနေအထားတွေ၊ ဆန်းသစ်မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သောကိစ္စတွေကိုတော့ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ကြင်ဖက်ကို ဖွင့်ပြော တောင်းဆိုလို့ မကောင်းတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို နည်းနည်းလောက် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ နောက်ပေါက်ကို အသုံးပြုဖို့ ဒါက ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
တစ်ကိုယ်တည်းလူပျိုကြီးအဖြစ်နဲ့ ဘ၀ဆုံးသွားနိုင်သည့် လက္ခဏာများ ဘယ်သူမဆို သေရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းပဲသေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တရာကြီးမြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်ကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သာမာန်လူသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သေဆုံးချိန်မှာ အဖော်အဖြစ်နဲ့ လိုက်သေပေးချင်တဲ့သူ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်မသေခင်အချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေချင်ဦးမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ တကိုယ်တည်းဘ၀နဲ့ အထီးကျန်စွာအဆုံးသတ်ရတော့မယ်လို့ ခံစားနေရရင်
စကားပြောကောင်းသူဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း ၆ ခု စကားပြောဆိုမှု အတတ်ပညာဟာ ဘ၀အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘ၀အတွက် အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေဖြစ်တဲ့ ဆရာသမား၊ အလုပ်ရှင်၊ ၀န်ထမ်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် စကားအပြောအဆိုက အရေးကြီးပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် အခြေခံကျသလို လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု
သင့်သက်တမ်းကို ၁၂ နှစ်ပေါင်းပေးမယ့် အလေ့အကျင့် ၇ ခု
သင့်သက်တမ်းကို ၁၂ နှစ်ပေါင်းပေးမယ့် အလေ့အကျင့် ၇ ခု တကယ်လို့သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ဘဝအမူအကျင့်အချို့ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရင် သင့်သက်တမ်းကို ၁၂ နှစ် အလွယ်တကူ ပေါင်းထည့်ပေးနိုင်မှာပါ။ အသက်ရှည်တဲ့ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်အတိုင်း လိုက်နေရုံနဲ့ သင့်သက်တမ်းက တိုးလာမှာပါ။ ၁၂ နှစ်အတိအကျကြီးတော့ ပေါင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက
တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ၀က်ခြံ ဆက်စပ်မှု
တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ၀က်ခြံ ပြဿနာ တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေခြင်းဟာ ၀က်ခြံထွက်စေတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးပါသလား။ တကယ်တော့ စိတ်ဖြေခြင်းနဲ့ ၀က်ခြံထွက်ခြင်းအကြား သိပ္ပံနည်းကျ ခိုင်လုံတဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ လူငယ်တွေကို အရွယ်မတိုင်ခင် လိင်မှုကိစ္စလိုက်စားတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လိင်ဆက်ဆံရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေရင် ၀က်ခြံပေါက်တတ်တယ်လို့ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတော့
ကွန်ယက်ဈေးကွက်စနစ်၏ လိမ်ဆင်များ Multi-Level Marketing (MLM) လို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ကွန်ယက်ဈေးကွက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီး MLM ကုမ္ပဏီတွေလည်း အများကြီးပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ စည်းရုံးမှုတွေကိုလည်း နေရာအနှံ့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေကလည်း သူတို့ရဲ့စနစ်ဟာ အနာဂတ်စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ အခြားဈေးကွက်စနစ်တွေနဲ့ အရောင်းပုံစံတွေ နေရာမှာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း
Movember ဆိုတာ အမျိုးသားများ အတွက် ဆိုတာသိပါသလား ?
အောက်တိုဘာလ ကုန်ဆုံးလို့ နိုဝင်ဘာလထဲကို ရောက်လာပြီဆိုတော့ နိုဝင်ဘာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကတော့ Movember လို့အမည်ရပါတယ်။ November ကို စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ Movember ဆိုတာက နှုတ်ခမ်းမွှေးကို အင်္ဂလိပ်လိုအခေါ် Moustache က Mo ဆိုတဲ့